Ra’iisul wasaare Kheyre oo shaaca ka qaaday xilliyadda uu shaqeyn doonno garoonka Aadan Cadde (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo shaaca ka qaaday xilliyadda uu shaqeyn doonno garoonka Aadan Cadde (SAWIRO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa shaaca ka qaaday in garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho uu shaqeyn doonno xilliyadda habeenkii iyo maalintiiba.
Ra’iisul wasaare Kheyre oo maalintii shalay furay mashruuca lagu dhigaayo nalalka suurta-gelinaya in xilliga habeenkii uu garoonka diyaaradaha shaqeeyo ayuu sheegay in howsha ay qaadan doonto muddo toddobaad ah kadibna garoonka uu bilaabi doonno inuu habeenkii shaqeeyo.
“In la helo nalal ifttimaya wadada ay diyaaraduhu ku dhaqaaqaan aad ayaa loogu baahi qabay, muddo todobaad ah ayay qaadan doontaa, kadibne si toos ayuu garoonku u shaqo billaabi doonnaa xilliyadda habeenkii, waxayna tallaabanadaan bilaw u tahay horumarinta garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyo weliba kuwa gobolada dalka” Sidaas waxaa yiri ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Dhinaca akle, nalalka oo in muddo ah la sugayay ayaa la sheegay inay soo iibisay dowladda federaalka Soomaaliya, wuxuuna ra’iisal wasaaraha mahadcelin u jeediyay wasaaradda gaadiidka iyo kooxdii kala shaqaysey howsha ay qabteen.
Ugu dambeyntii, ra’iisul wasaare Kheyre yaa kula dardaarmay dhamaan shaqaalaha garoonka ka shaqeeya inay si taxadar leh u ilaaliyaan qalabkaan, maadaama uu yahay hanti qaran, isagoona sidoo kale ka codsaday madaxda garoonka inay dowlada kusoo wargeliyaan qalabka kale ee garoonka ka dhiman.